Dhalinyaro lagu dilay Magaalada Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dhalinyaro lagu dilay Magaalada Muqdisho
Dhalinyaro lagu dilay Magaalada Muqdisho
Dilalka Wiilalka Dhalinyarada ah ayaa waxaa uu siyaabo kala duwan uga dhacay degmooyinka Hodan iyo Deeyniile ee Gobolkan Banaadir, iyada oo dadkii ka dambeeyay dilkaas ay Goobta ka baxsadeen.
Dilka 1aad ayaa waxaa uu ka dhacay xaafada Siigaale ee degmada Hodan, waxana la sheegay in Nin ku hubeysnaa Bustoolad oo la sheegay in uu ahaa Askari uu toogtay Wiil dhalinyrao ah oo Magaciisa lagu soo koobay Nuuradiin.
Dhinaca kale Rag la sheegay inay ahaayeen Burcad ayaa Xaafada Haanta-dheer ee degmada deeyniile ku dileen Wiil Dhalinyaro ahaa oo lagu Magacaabi jiray Jabriil Cabdi Aadan, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Wararka la helay ayaa sheegaya in kooxaha Burcadda ah ay Wiilka Dhalinyarada ah ka dhaceen Taleefoon uu watay, balse uu jiray a hor dilka muran dhex-maray, waxana meydkiisa la geeyay Xarunta Hay’adda dambi-baarista CID-da ee Magalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa kusoo batay dhaca taleefoonada, waxaana marraka qaar Kooxaha Burcadda ah ay dileen dadka ay taeeloonada ka qaadanayaan.